Ihe oriri na-edozi ahụ - iSearch
Ha kwere nkwa ike, ike, ntutu isi: ihe mgbakwunye ihe oriri. Ma ọ bụ na ha bara uru dị ka anyị nwere olileanya?
Ihe oriri na-eri nri - ngwá agha anwansi maka akpụkpọ anụ, ntutu isi na uche
Dịkarịa ala, ọtụtụ n'ime anyị maara ihe dị mkpa na nri dị mma: mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri zuru ezu, anụ dị ala, otu ugboro n'izu azụ ... Ya mere, n'ihe gbasara atụmatụ nri ahụ ga-achọ ka e nye ya vitamin na ihe ndị dị na ya. Ma, ọ dị mwute ikwu na ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-adị ndụ kwa ụbọchị. Ọtụtụ oge ọ ga-aga ngwa ngwa, oge maka ịcha mkpụrụ osisi ma ọ bụ ihe nchekwa ihe oriri adịghị adị. A na-enweta nri site na kọntinet - ma ọ bụ nri ngwa ngwa. Ntuzi ihe oriri nwere ike bụrụ nanị izu ole na ole - na-eri nri ọbụna karị. Ma na oge ụfọdụ, ọ bụ naanị onye ọ bụla n'ime anyị ga-eguzo n'ihu enyo, na-atụ egwu ịchọta na ntutu dị nro, okpukpu ahụ ma ọ bụ akpụkpọ anụ. N'ụzọ dị mma, ụlọ ahịa ọgwụ ahụ na-enye ihe oriri dị mma nke jupụtara na ihe mgbakwunye nri na-enye anyị nkwa ịma mma, ahụike na ahụike. Ya mere, tinye mkpụrụ ọgwụ ole na ole na ihe nile ga-adị mma? Kwụsị! Tupu i mee ngwa ngwa, ị ga-ahụ ihe ụfọdụ dị mkpa:
Ụdị ezi ahụike na ọdịmma
Onye ọ bụla nke atọ na Germany taa na-eme ihe mgbakwunye kwa ụbọchị. Nke a bụ nsonaazụ nke Forsa nke Ụlọ Ọrụ Ndị Ọrụ nyere. Ma ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-enye nri zuru oke site na nri kwesịrị ekwesị. Ihe a na-eleghara anya bụ na ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ na powders anaghị adị irè n'ihi na ahụ anaghị enwe ike iji ihe oriri ndị a. Ọdịdị dị elu nwere ike ọbụna bụrụ ihe na-emerụ ahụ maka ihe ụfọdụ. Ọbụna na ọrịa ndị dị ugbu a na iji ọgwụ ụfọdụ eme ihe, mmadụ ekwesịghị iji ngwa ngwa na-etinye ihe ọṅụṅụ vitamin.
Ya mere, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịkpọtụrụ dọkịta tupu ejiri ihe mgbakwunye. Nke a ga-ekpebi ma enwere ụfọdụ vitamin, mineral ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na achọta ihe oriri ka ọ bara uru, ọ dị mkpa ịgbaso nkwụnye ego a na-atụ aro kwa ụbọchị iji zere imebiga ihe ókè. Dị ka ihe atụ, oke vitamin D, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịnweta nsonaazụ siri ike: isi ọwụwa, ọgbụgbọ na ụkọ agụụ, n'ọnọdụ ọjọọ kachasị ọkpụkpụ ọkpụkpụ ma ọ bụ akụrụ akụrụngwa nwere ike ịpụta.
Kedu mgbe ihe nchịkọta nri bara uru?
Ntụle nri na-edozi ahụ nwere ike ịba uru na ihe ụfọdụ nke ndụ. Dịka ọmụmaatụ, n'oge ime ime: Ọ bụ ezie na mkpa maka calorie ndị ọzọ na-amụba nanị ntakịrị ma nwee ike ịchọta mkpụrụ akụkụ abụọ nke achịcha zuru ezu na cheese cheese, mkpa maka vitamin, mineral na ihe ndị na-emepụta ihe na-abawanye ụba. Iji rute ọkwa dị mkpa, ụmụ nwanyị dị ime na ụmụ nwanyị na-enye nwa ara kwesịrị iri nnukwu akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi dum, obere mmiri ara ehi na mmiri ara ehi, azụ mmiri na abụba abụba. Otú ọ dị, ọ bụghị naanị ihe oriri ka a ga-esi edozi mkpa nke mkpa na ayodi na folic acid. Ya mere, a na-akwado ọgwụ 400 μg folic acid kwa ụbọchị na 100 - 150 μg iodine n'ụdị mgbakwunye ihe oriri maka ndị ime ime. Otú ọ dị, ị na-eji mgbakwunye ígwè ma ọ bụ nri ndị ọzọ kwesịrị ime mgbe ị gụchara dọkịta.
Ihe nchịkọta nri pụkwara ime ka uche dị mma maka vegans. Site n'iwepu ihe oriri nile nke anu anumanu, ha na-eche ihe ize ndụ nke enweghi ígwè, calcium, iodine na Omega-3 fatty acid, zinc na B vitamin (karịsịa vitamin B12).
Ndị na-eme egwuregwu na-achọ ka ọtụtụ mineral na-arịwanye elu. Maka na otu liter nke ajirija banyere 36 mg nke magnesium na-ehichapụ, ọ dị ha mkpa ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa maka erughị eru. Ọ bụ ezie na ụbara ihe a na-achọ ga-ezute site na nri ndị kwesịrị ekwesị na ihe oriri ndị dị ka ikpo ahịhịa, koko ntụ ntụ na ngwaahịa soy, nke a anaghị ekwe omume mgbe niile. Nakwa na oge nkwadebe maka asọmpi na n'oge nri maka ịbịaru otu akụkụ dị arọ, inyefe ihe oriri nwere ike ịbụ ihe amamihe dị na ya.
Naanị, enwere ike ịsị na ihe mgbakwunye na-edozi ahụ nwere ezi ihe maka inye ozu ahụ na mineral ndị dị mkpa, ihe ndị na-emepụta ma ọ bụ vitamin. Otú ọ dị, ọ bụrụ na enwere mkpa ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị nọ n'ihe ize ndụ nke nkwụsịtụ, naanị dọkịta nwere ike ijide n'aka.
ụtọ isearch - August 16, 2018 0
Ọtụtụ ndị Germany na-aṅụ ọtụtụ iko kọfị n'ụbọchị nile: ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ bụ otu n'ime mmanya ndị kachasị ewu na ya ma ọ bụrụ na ọ nwere uto pụrụ iche. Ebee ka ...
ụtọ isearch - July 31, 2017 0
Achịcha na-atọ ụtọ dịka ọkachamara Ọ bụla na-enwe mmasị iri nri dị mma, ọkacha mma ọbụna na-eme achịcha na-ekpo ọkụ. Nke mbu bu nri achicha. Nke a anaghị eguzo ...
ahụ ike isearch - October 8, 2017 0
Hịa aka n'ahụ ịsa ahụ bụ otu n'ime usoro ịhịa aka ọkụ kachasị. Ọ na - eme ka ọbara gbasaa ma nyere aka mee ka obi ghara iru gị ala. N'otu aka ahụ, ọ dị mma maka idozi nrụgide otu akụkụ, maka…
ahụ ike isearch - September 14, 2017 0
Ọrịa dị mma nke ịba uru yana iku ume ume zuru oke Ọtụtụ mmadụ na-eme mkpesa maka ahụ erughị ala mgbe iku ume yana elu akụkụ iku ume nwere ike imetuta enyemaka nke onye inhaler ...
ahụ ike isearch - August 18, 2017 0
Ahụike mmadụ bụ ihe kachasị mma nke ụmụ mmadụ nwere. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ka anyị nwee ahụike kachasị mma, ...
ladies igwe mkpụcha ajị
ahụ ike isearch - August 14, 2017 0
N’eji ajị ajị ụmụ nwanyị, akpụkpọ ahụ dị mma nro ma dịkwa mma n’ikpeazụ, enwere mgbanyụ ụmụ nwanyị na-agbanwe agbanwe nke na-ewepụ ntutu isi ahụ ngwa ngwa, n’ụzọ dị mma ma jiri nwayọ. Dịkwa nnọọ ...
ahụ ike isearch - August 11, 2017 0
Nlekọta kọntaktị bụ ngosipụta unobtrusive nke iko. Ọ dịghị onye na-ahụ na a chọrọ enyemaka enyemaka ma ikwe ihe ngosi anaghị egbochi ihu. More na ndị mmadụ ...
Ọtụtụ mgbe, enyi ndị enyi anọ a hụrụ n'anya ga-eso ndị nwe ha na njem ha. N'ikpeazụ, ọ bụghị ihe a na-apụghị izere ezere ka onye nlekọta anụji. N'agbanyeghị ihe mere nkịta ga-eji gaa, iji igbe nkịta dị mma. N'okpuru onwe ya ọ na-elekọta nchekwa nke nkịta na onye ọkwọ ụgbọala. N'ihi na ...
Na mgbakwunye na nwamba, nkịta bụ anụ ndị a ma ama nke ndị German. N’ezie, yabụ nwee nkịta nkịta, ka ndị enyi anọ nwere mmasị nwere ike nwee obi ụtọ. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ihe ị ga - ebu n’uche ka nkịta wee nwee obi ụtọ. Doghouse na aka nri ...
Enwere ike ịzụta ọba rabbit maka ozuzu, kamakwa maka ndị na-ahụ anụmanụ. N'ihi ya, ihe ndị a na-achọ n'ọba rabbit dị iche. Otú ọ dị, a ghaghị inye ihe dị mkpa n'ọdịmma anụmanụ. N'ebe a na-ere ahịa nakwa na ụlọ ahịa na ntanetị, a na-enye ụlọ nzukọ ndị dị mfe dị nro n'emeghị ka ha na-agba chaa chaa ma na-akwagharịkwa ....
Nkịta na-ehi ụra - dị mma, ọ dị ọfụma na nkịta na-etinye oge buru ibu na-ehi ụra. Nke mere na ebe kachasị amasị ya maka nke a abụghị sofa ma ọ bụ akwa nna ukwu na nne nwanyị, a ga-edobe ya ebe ọ ga-ehi ụra nke ọma. O nwere ike ịpụ ebe ahụ na otu oge…
Ilekọta ajị ajị anụ ahụ na-echebe ahụ ike nke pusi groomchụ ọcha bụ akụkụ mbụ nke nlekọta nwamba. Iji mee ka akpụkpọ ahụ na ntutu dị mma, ekwesịrị ilekọta akwa cat ọ bụla anya na oge. Dabere na njupụta na ịdị ogologo, agbanyeghị, ịdị ike nke nlekọta achọrọ nwere ike ịdị iche iche nke ukwuu ....
Ngosiputa Ngwa & Ịdị ọcha isearch - October 6, 2017 0
Afụ ọnụ bea kwesịrị ka - agbanyeghị ma ọ bụrụ na mkpụrụ ụbọchị atọ ma ọ bụ ajị agba zuru oke. Ajị agba bụ ihe na-ewu n'oge afọ niile ma ndị nwoke na-eyi ya…
Ọkụ eletrik na-ada ụda ezé
Ngosiputa Ngwa & Ịdị ọcha isearch - September 23, 2017 0
Ngwunye ezé na-acha ọcha Sonic ezé A ga-enwerịrị ezé nicer ncha Dị ọcha bụ akụkụ nke ndụ a na-adị kwa ụbọchị, mana - mee ihe n'eziokwu - ugboro ole ka ị na-asa ahịhịa ...
Ngosiputa Ngwa & Ịdị ọcha isearch - September 15, 2017 0
Ihe niile gbasara onye na - ehicha ntutu Onye na - ehicha ntutu na - eme ka ntutu gị dị mmiri kpoo ngwa ngwa. Ya mere, iji ụdị ngwaọrụ a karịsịa na ...
Ngosiputa Ngwa & Ịdị ọcha isearch - September 4, 2017 0
Izi oke na ịrụ ọrụ nke ọma na nhọpụta ezé na-agbanwe elektrọniki Ezigbo onye na-elekọta ezé na nhicha ezé.
Ngosiputa Ngwa & Ịdị ọcha isearch - September 1, 2017 0
Nlekọta ahụ bụ ihe dị mkpa. Ihe a na-elekwasị anya bụ ilekọta anya ihu. Ihu bụ ihu nke mkpụrụ obi. E nwere ...
protein ntụ ntụ
ekwukwa n'akwụkwọ Mmeju isearch - July 11, 2017 0